किन जापानी मानिसहरू यति धेरै फिट देखिन्छन ? रहस्य यस्तो रहेछ ! – Rastriyapatrika
प्रत्येक देशले संसारलाई केही चीज वा यसको संस्कृतिको माध्यमबाट सिकाउँछ। के तपाईंलाई थाहा छ किन जापानी केटीहरु बुढी देखिदैनन ? जापानी मानिसहरू फिट हुन्छन र धेरै सक्रिय देखिन्छन। आउनुहोस जानौं उनीहरूको जीवनशैलीको बारेमा जो उनीहरुले दैनिक दिनचर्यामा के गर्दछन र उनीहरूसधै स्वस्थ देखिन्छन
ग्रीन टि मा एन्टिओक्सिडेंट समावेश हुने गर्दछ जसले गर्दा छालाचौरी पर्दैन। दैनिक पिउने गरे वजन पनि कम हुन्छ र यसले क्यान्सर र हृदय रोगबाट पनि बचाउँछ । जापानी व्यक्तिले दैनिक कम्तिमा १-२ कप ग्रीन टि पिउने गर्दछन् ।
जापानी हरुले कुखुरा,खसी बंगुर आदि को मासु भन्दा सी- फुड ( समुन्द्री) बढी खाने गर्द छन् । रातो मासुको बढी सेबन ले, कोलेस्ट्रॉल र मोतापा बढ्छ । तर सैल्मन, ट्यूना माछा, झिंगा माछा आदि मा प्रोटीन र ओमेगा3फ्याटी एसिड बढी मात्रामा भेटिन्छ जसले गर्दा उनीहरु सधै फ्रेश देखिन्छन ।
अध्ययनले देखाउँछ कि औसतमा जापानी हरु नियमित रूपमा हिड्छन।बढी हिड्नाले तनाब पनि कम हुन्छ र वजन पनि कम हुन्छ।
जापानमा पुरुष र महिला दुवै मार्शल आर्ट जस्ता जुडो, कराते उशु आदि सीक्छन्। त्यसकारण उनि हरु यति स्वास्थ्य देखिन्छन । यसकारण उनीहरूको शक्ति, लचीलापन र सहन शक्ति बढी हुन्छ । सधै फित रहनाले उनीहरु कहिल्लै बुढो देखिदैनन ।
धेरै पटक खान्छन
जापानी व्यक्तिहरूले धेरै पटक खान्छन तर थोरै-थोरै । जसले गर्दा उनीहरुको पेट खाली रहदैन र बढी पनि खादैनन् जसले गर्दा तिनीहरू आफ्नो वजन सजिलै मेन्टेन गर्दछन ।
ध्यान गर्नु उनीहरुको जिबनको एउटा पाटो हो । सबै पुरुष, महिला, जवान र बूढो मान्छे जापानमा ध्यान गर्छन्। ध्यानले तनाव कम गर्छ र आयु बढ्छ।